[Ngexesha elithile! Intengiso yesaphulelo sexesha elide] Igumbi elivulekileyo elinombono wolwandle ukuhamba ngomzuzu om-1 ukuya elunxwemeni olunesanti! Kukho ibhafu enkulu yasentwasahlobo eshushu - I-Airbnb
[Ngexesha elithile! Intengiso yesaphulelo sexesha elide] Igumbi elivulekileyo elinombono wolwandle ukuhamba ngomzuzu om-1 ukuya elunxwemeni olunesanti! Kukho ibhafu enkulu yasentwasahlobo eshushu
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu伊豆民泊com - 鈴木
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike u伊豆民泊com - 鈴木 iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Yigumbi lekona kumgangatho we-7 we-resort condominium, ukuhamba ngemizuzu emi-2 ukuya eShirahama Chuuou Beach kunye nokuhamba ngemizuzu eyi-15 ukuya kwiShirahama Beach eyaziwayo. Unokonwabela umbono wepanoramic olwandle ukusuka kwigumbi lakho.
Ixhotyiswe ngokupheleleyo nge-Wifi, ngoko ke ifanelekile kwi-telework.
Sinikezela ngezaphulelo ngobusuku obulandelelanayo kude kube nge-1 kaMatshi.
2 ubusuku: 15% 3 ubusuku: 20% 5 ubusuku: 25% 1 iveki: 35% 2 iiveki: 40% 1 inyanga 45%
Sikwabonelela ngenkonzo yokutya apho unokonwabela i-Izu sushi.
Kukwakho nebhafu enkulu yasentwasahlobo eshushu kwi-condominium. (Ihlawulwe: 500 yen / umntu)
Yigumbi lekona kumgangatho we-7 we-resort condominium, ukuhamba ngemizuzu emi-2 ukuya eShirahama Chuuou Beach kunye nokuhamba ngemizuzu eyi-15 ukuya kwiShirahama Beach eyaziwayo.
Unokonwabela umbono wepanoramic olwandle ukusuka kwigumbi lakho.
Isicwangciso somgangatho yi-2DK (yokutya / ikhitshi, igumbi lokulala (igumbi laseNtshona x 2), ibhafu yeyunithi.
Ikhitshi ine-oven ye-microwave, i-oven yetoaster, iketile, isitovu se-IH, kunye nefriji, onokuyisebenzisa ngokukhululekileyo.
■ Malunga negumbi lokulala nelokulala
Igumbi lohlobo lwaseNtshona → ibhedi eyodwa x 2
Igumbi lohlobo lwaseNtshona 2 → Futon x 3
Izomisa iinwele, iishampu, iiconditioners, iisepha zomzimba, iitawuli zokuhlambela, iitawuli zobuso, iibrashi zamazinyo, iikama, umqhaphu, ukucheba, njl njl. ziyafumaneka kwinqanaba elifanayo njengeehotele.
Sinikezela ngetyuwa, iswekile, isosi yesoya, kunye neoyile yesaladi njengezinongo.
Izinto zokupheka ziquka ii-oven microwaves, ii-rice cookers, iipani zokuqhotsa, iimbiza ezincinci, izitya, i-colanders, iimela zasekhitshini, iibhodi zokusika, ii-peelers, iigrater kunye neebhola.
Ngokuphathelele i-tableware, ungasebenzisa ngokukhululekile izinti, i-cutlery, iiglasi, iiglasi zewayini, ii-mugs, iipleyiti ezinkulu kunye ezincinci, izitya, izitya, njl.
Uluhlu lokufikelela kwiindwendwe
Ungangena kwigumbi ngephedi yamaqhosha.
Siza kukunika inombolo xa usuku lokubhukisha lusondela.
Amanye amanqaku akhethekileyo
<< Malunga nendawo yokupaka >>
Ungayipaka imoto yakho kwindawo yokupaka kwindawo yokupaka.
Yi-1000 yen / ngosuku ukusuka nge-21 kaJulayi ukuya phakathi kuSeptemba, kunye ne-700 yen / ngosuku ngenye indlela.
<< Malunga nenani logcino >>
Nceda uqiniseke ukuba usazise ukuba kukho utshintsho kwinani labantu ebekelwe bucala.
Ukuba kukho ukungafani kwinani labantu abagciniweyo, siya kuhlawula umrhumo owongezelelweyo wokumahluko kwinani labantu + amaxesha angama-1.5 inani elipheleleyo njengesohlwayo.
<< Malunga nokutshaya >>
Igumbi alitshaywa kwaphela.Nceda usebenzise indawo yokutshayela kwibalcony.
Ukuba ukutshaya kufunyenwe ngaphakathi, isohlwayo esifikelela kuma-yen angama-50,000 siya kuhlawuliswa.
<< Amanqaku asetyenziswayo >>
Ukuba imeko yosetyenziso imbi kakhulu, sinokucela intlawulo yokucoca eyahlukileyo / imbuyekezo yomonakalo. Ukongeza, ukuba into yonakalisiwe okanye ibiwe, isixa esipheleleyo siya kuhlawuliswa.
Umbuki zindwendwe ngu- 伊豆民泊com - 鈴木
Izimvo eziyi-1 188
Inombolo yomthetho: M220029476
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Shimoda